Debanye mkpesa banyere ụlọ ikpe | Law & More B.V.
blog » Tinye akwụkwọ mkpesa gbasara ụlọ ikpe
Tinye akwụkwọ mkpesa gbasara ụlọ ikpe
Ọ dị mkpa ka ị nwee ma nwee ntụkwasị obi na ngalaba ikpe. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mee mkpesa ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ụlọ ikpe ma ọ bụ onye ọrụ ụlọ ikpe ahụ emesoghị gị ihe n'ụzọ ziri ezi. Ga-eziga akwụkwọ ozi na kọmitii nke ụlọ ikpe ahụ. Ikwesiri ime nke a n'ime otu afọ nke ihe ahụ mere.
Ọdịnaya nke mkpesa ozi
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka onye otu ndị ọrụ ma ọ bụ onye ọka ikpe nke ụlọ ikpe agaghị emeso gị otu ị kwesiri, ụlọ ikpe mkpegharị, Tradelọ ikpe mkpegharị nke Azụmaahịa na Mmepe (CBb) ma ọ bụ Central Appeals Tribunal (CRvB), ị nwere ike faịlụ a gbasara akwụkwọ mkpesa. Nke a nwere ike bụrụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ichere ogologo oge maka azịza nye leta gị ma ọ bụ maka njikwa okwu gị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị gị ka otu onye ma ọ bụ karịa ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ikpe anaghị agwa gị nke ọma ma ọ bụ otu onye n'ụlọ ikpe ahụ gwara gị okwu. Mkpesa ahụ nwekwara ike ịbụ maka ụda, okwu ma ọ bụ nhazi nke akwụkwọ ozi ma ọ bụ banyere ịghara inye ozi, inye ozi oge, ịnye ozi na-ezighi ezi ma ọ bụ inye ozi ezughi oke. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọnọdụ niile, mkpesa ahụ ga-abụrịrị maka onwe gị. You nweghị ike ime mkpesa banyere ụzọ ụlọ ikpe siri mesoo onye ọzọ; na bụ nke onye ahụ na-eme. Ọ gwụla ma ị tinyere akwụkwọ mkpesa na nnọchite onye ị nwere ikike ma ọ bụ onye nlekọta, dịka ọmụmaatụ obere nwa gị ma ọ bụ onye nọ n'okpuru nlekọta gị.
IHE: Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi ụlọ ikpe ma ọ bụ mkpebi nke ụlọ ikpe kpebiri ka a na-ekpe ikpe gị, ị nweghị ike ịme mkpesa gbasara ya. Ekwesịrị ime nke a site n'ụkpụrụ ọzọ dị ka itinye akwụkwọ mkpegharị megide mkpebi ahụ.
Nwere ike itinye akwụkwọ mkpesa gị n'ụlọ ikpe ebe ikpe gị na-echere. Ikwesiri ime nke a n'ime otu afọ mgbe ihe ahụ mechara. Ga-eziga kọmitii nke ụlọ ikpe ahụ metụtara. Ọtụtụ ụlọ ikpe na-enye gị ohere itinye akwụkwọ mkpesa gị na nzuzo. Iji mee nke a, gaa na www.rechtspraak.nl na kọlụm aka ekpe, n'okpuru isiokwu bụ 'ụlọ ikpe', họrọ 'Enwere m mkpesa'. Họrọ ụlọ ikpe ahụ metụtara ma jupụta n'ụdị mkpesa dijitalụ. Nwere ike izipu akwụkwọ a n'ụlọ ikpe site na e-mail ma ọ bụ site na ozi mgbe niile. Inwekwara ike idegara ụlọ ikpe gị akwụkwọ mkpesa n’edereghị gị akwụkwọ a. Your akwụkwọ ozi ga-ebu na-esonụ ozi:
Ngalaba ma ọ bụ onye ị nwere mkpesa gbasara ya;
Ihe kpatara na ị na-eme mkpesa, ihe mere na mgbe;
aha gị, adreesị gị na nọmba ekwentị gị;
gị mbinye aka;
ikekwe mbipụta nke akwụkwọ metụtara mkpesa gị.
Ijikwa nke mkpesa
Mgbe ị nwetara mkpesa gị, anyị ga-ebu ụzọ chọpụta ma enwere ike ịnagide ya. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, a ga-agwa gị ozugbo enwere ike. Ọ nwekwara ike bụrụ ikpe na mkpesa gị bụ ọrụ nke ahụ ọzọ ma ọ bụ ụlọ ikpe ọzọ. Ọ bụrụ otu ahụ, ụlọ ikpe ga-etinye akwụkwọ mkpesa gị ma mee ka ị mata maka mbugharị a. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’echiche na enwere ike idozi mkpesa gị nfe, dịka ọmụmaatụ site na mkparịta ụka (ekwentị), ụlọ ikpe ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike. Ọ bụrụ na enyere mkpesa gị, usoro a bụ:
Ndị nlekọta ụlọ ikpe ga-agwa ndị (onye) ndị ị na-eme mkpesa banyere mkpesa gị;
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-agwa gị ka ị nyekwuo ozi gbasara ihe omume ahụ;
N'ikpeazụ, ndị ụlọ ikpe na-eme nyocha;
Na ụkpụrụ, a ga-enye gị ohere ịkọwapụtakwara mkpesa gị na kọmitii nke ụlọ ikpe ma ọ bụ kọmitii ndụmọdụ gbasara mkpesa. Onye mkpesa metụtara ya agatụghị edozi mkpesa ahụ n'onwe ya;
N’ikpeazu, ndi ulo ikpe na-ekpe nkpebi. A ga-agwa gị mkpebi a ederede. Nke a na-emekarị mere n'ime 6 izu.
You nwere ajụjụ ọ bụla n'ihi blọọgụ a? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ.
Previous Post Ikpe na ikpe ihu igwe megide Shell
Next Post Gba alụkwaghịm na ụmụaka: nkwurịta okwu bụ isi